Buy Large Hollow Round 9-inch Silicone Gugelhup Cake Mold - Free Shipping & No Tax | WoopShop®
ကြီးမားသော Hollow Round9လက်မအရွယ် silicone Gugelhup ကိတ်မုန့်
အရောင် အနီရောင်2ခြော့ကလကျ ဝါသော စိမ်းလန်းသော ပြာသော အနီရောငျ NewGreen ခရမ်းရောင်နု NewRed နယူး ခရမ်းရောင်2NewOrange အပြာ 2
အနီရောင်2ခြော့ကလကျ ဝါသော စိမ်းလန်းသော ပြာသော အနီရောငျ NewGreen ခရမ်းရောင်နု NewRed နယူး ခရမ်းရောင်2NewOrange အပြာ 2
အကြီးစား Hollow Round ၉ လက်မစီလီကွန် Gugelhup ကိတ်မုန့် - အနီရောင် ၂ backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ကိတ်မုန့် Tools များရိုက်ထည့်ပါ: မှို
အမျိုးအစား: ကိတ်မုန့် Tools များ
လက်မှတ်: အီး / ဥရောပသမဂ္ဂ,CIQ,EEC,FDA က
အသုံးပြုမှု - ခaking
ပစ္စည်းများ၏ texture: S ကိုilica ဂျယ်
ခွဲခြား: မှို / ကိတ်မုန့်ဖုတ်ဖုတ်
9 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
BEDANKT VOOR SNELLE VERZENDING: (* * * * *) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Gyors volt nagyon, termek teljesen megfelelo
အရောင်သည်အနီရောင်မဟုတ်သော်လည်းလှပသောပန်းရောင်ဖြစ်သည်။ အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့နှင့်အတူအရည်အသွေးကောင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဒါ fast.Looking ကောင်းသောရောက်ရှိခဲ့သည်။ အတည်ပြုဖို့ရုံးတင်စစ်ဆေးခံရဖို့သာ။ ငါမကြာမီငါလုပ်ပါ။ ငါအကြံပြုသောတောက်ပစတိုးဆိုင်။